9th November 2019 – Myanmar Hot News
Posted on 9th November 2019 9th November 2019 Author lkadmin Comment(0)
ပရိတ်​သတ်​​တွေချစ်​ကြတဲ့ peach layတို့​မေ​မေ သင်​ဉ္ဇာနွယ်​ဝင်း ဟာ လက်​ရှိမှာ ဒုတိယ ကိုယ်​ဝန်​ကိုလွယ်​ထားရပြီး အလိုချင်​ဆုံးဖြစ်​တဲ့သမီး​လေးကိုလွယ်​ထားရတာဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ သင်​ဉ္ဇာနွယ်​ဝင်းဟာ အနုပညာ အလုပ်​​တွေကိုမလုပ်​​တော့​ပေမယ့်​ အ​ပေးသူပရိတ်​သတ်​​တွေနဲ့ သူတို့မိသားစုကိုချစ်​ခင်​အား​ပေးကြသူ​တွေက​တော့ ရှိဆဲပါဘဲ။ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့ကတော့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းရဲ့သား Peach လေးရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Peach လေးလို့ ချစ်စနိုးနဲ့နာမည်ပေးထားတဲ့ သားလေးက ဒီနေ့မှာ အသက် (၂)နှစ်တိတိပြည့်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိတ်​သတ်​​တွေရဲ့ အချစ်​​တွေကိုလည်း ရရှိထားတဲ့ Peach​လေးဟယ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့တစ်နေ့တစ်ခြား ကြီးပြင်းလာကာ ပိုပိုပြီးချစ်ဖို့ကောင်းလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်​ဉ္ဇာနွယ်​ဝင်းဟာ လက်​ရှိမှာ သမီး​လေးအတွက်​ ကြိုတင်​ပြင်​ဆင်​မှများစွာပြုလုပ်​ထားပြီး ​စောင့်​​မျော်​​နေလျက်​ရှိပါတယ်​။ နိုဝင်​ဘာ လကုန်​မှာ​မွေးမှာဖြစ်​ပြီး သူမအတွက်​​အ​ဖော်​ရမယ့်​သမီး​လေးအတွက်​သိပ့်​ကို​ပျော်​ရွှင်​​နေပါတယ်​။ပရိတ်​သတ်​​တွေ အတွက်​သင်​ဉ္ဇာနွယ်​ဝင်းတို့မိသားစုပုံ​လေး​တွေပို​ဖော်​ပြလိုက်​ပါတယ်​။ Source _Thinzar Nwewin
” မီ “အဖြစ်​နဲ့ ပရိတ်​သတ်ေ​​တွ စွဲလမ်းသွားခဲ့ရတဲ့ ပိုင်​ဖြိုးသုဟာ လက်​ရှိမှာလည်း အနုပညာ အလုပ်​​တွေကို မနားတမ်းဆက်​လက်​လုပ်​ကိုင်​​နေရပါတယ်​။လတ်​တ​လောပရိတ်​သတ်​​တွေကြား​ရေပန်းစား​နေတဲ့ ဇာတ်​ကား​တွေ ဖြစ်​တဲ့ “ထာဝရ​နှောင်​ကြိုး “ဇာတ်​ကားထဲက ” ဝတ်​မှုန်” အဲဖြစ်​နဲ့လည်း ပရိတ်​သတ်​​တွေ ရဲ့ အား​ပေးမှုကိုအပြည့်​အဝရရှိထားပါ​သေးတယ်​။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်​ပိုင်းမှာ “ထာဝရ​နှောင်​ကြိုး ” အဖွဲ့သား​တွေဟာ အမြို့မြို့အနယ်​နယ်​ဆီ လတ်​မှတ်​ထိုးပွဲများလုပ်​ကာ ပရိတ်​သတ်​​တွေနဲ့ ​တွေ့ဆုံးခဲ့ကြပြီး ဒီ​နေ့မှဘဲ ရန်​ကုန်​ကိုပြန်​​ရောက်​ခဲ့တာပါ။ ပိုင်​ဖြိုးသုတစ်​​ယောက်​ကလည်း အိမ်​နဲ့ အကြာကြီး ခွဲကာ ခရီး​တွေ တစ်​ခုပြီးတစ်​ခု ထွက်​​နေခဲ့ပြီး လက်​ရှိမှာ​တော့ အိမ်​ကိုပြန်​​ရောက်​လာပြီဖြစ်​ပါတယ်​။ “ကိုယ်က ကိုယ့်ရုပ်ရှင်promotion tourကနေအိမ်ပြန်ရောက်လာချိန်မှာ သူကသူ့ရုပ်ရှင်အတွက်location huntလုပ်ဖို့ခရီးထွက်သွားရခြင်း.”ဟုဆိုကာ ပိုင်​ဖြိုးသုက ဒါရိုက်​တာ ဏကြီးရဲ့ သူမတို့ရဲ့ လွဲ​ချော်​မှု​လေး​တွေကို​ပြောပြထားပါတယ်​။ သူမပြန်​​ရောက်​တဲ့ အချိန်​မှဘဲ ဒါရိုက်​တာဏကြီး ကသူ့ရဲ့ အသစ်​ရိုက်​ […]
မင်းသမီး​လေးဖြစ်​တဲ့ ခြူး​လေး တစ်​​ယောက်​ဟာ ကျရာဇာတ်​ရုပ်​နဲ့ အပိုအလိုမရှိ​အံ့ဝင်​ခွင်​ကျ သရုပ်​​ဆောင်​နိုင်​တာ​ကြောင့်​ ပရိတ်​သတ်​အား​ပေးမှုအခိုင်​အမာရရှိထားတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး ဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ပရိတ်​သတ်​အခိုင်​အမာရရှိထားပြီးတဲ့ ​နောက်​မှာ​တော့ ဇာတ်​လမ်းတွဲ​တွေသာ မက ရုပ်​ရှင်​ ဇာတ်​ကားကြီး​တွေမှာပါ ​ခေါင်း​ဆောင်​မင်းသမီး​အဖြစ်​ပါဝင်​နိုင်​​နေပြီဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ သူမရဲ့ရုံတင်​ပြသ​တော့မယ့်​ဇာတ်​ကားများရှိသလို လက်​ရှိရိုက်​ကူး​နေတဲ့ ဇာတ်​ကားကြီး​တွေလည်း ရှိပါတယ်​။ ခြူး​လေးဟာ အချစ်​သစ်​မရှာဘဲ တစ်​ကိုယ်​တည်း ​ပျော်​​ပျော်​​နေကာ အနုပညာ အလုပ်​​တွေကိုကြိုးစားလုပ်​ကိုင်​​နေပြီးအခုဆို အရင်​ကထက်​ပို​အောင်​မြင်​တဲ့ မင်းသမီး​လေးဖြစ်​​နေပါပြီ။ ခြူး​လေးဟာ ဒီ​နေ့မှာ သူမရဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​ ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ပုံ​လေး​တွေကိုတင်​​ပေူထားပါတယ်​” ဒီနေ့ သမာဓိ စိန်ရွှေရတနာ ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲ ဖဲကြိုးဖြတ် ပုံရိပ်လေးပါ ..” ခြူး​လေးက အရင်​ထက်​ပိုနုပြီး က​လေး​လေးလိုချစ်​ဖို့​ကောင်း​နေတယ်​​နော်​။ ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​ ခြူး​လေးရဲ့ ပုံ​လေး​တွေကို ​ဖော်​ပြလိုက်​ပါတယ်​။ Source _ chue chue
Hanna Yuri လေးကို ချစ်စနိုးနဲ့ အားလုံးက Riလေးလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင်ကလဲ Ri ကလို့ အမြဲ သုံးနှုန်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမဟာ Makeup Artist တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ပြင်ပေးတဲ့ မိတ်ကပ်တွေဟာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးပါတယ်။ အရမ်းလဲ Professional ဆန်ပါတယ်။ လူလေးကလဲ လှ စိတ်ထားလေးကလဲ ကောင်းပြီး အသံလေးကလဲ ကပြားမလေးမို့ ဝဲဝဲလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ မနေ့က 9ရက်နေ့က သူမရဲ့ မွေးနေ့လေးပါ။ သူမရဲ့ ပရိတ်သတ် နဲ့ မိတ်ဆွေတွေက မွေးနေ့လက်ဆောင် တွေ ပေးနေတာကို သူမရဲ့ Facebook Myday မှာ တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အရမ်းကို ပျော်မြူးနေတဲ့ သူမဟာ […]
တစ်​​ယောက်​ကိုတစ်​​ယောက်​နားလည်းမှုနဲ့ သစ္စာရှိရှိချစ်​​နေတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးလေးနဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ ပရိသတ်တွေအားကျချစ်ခင်ရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အရမ်း​ချော အရမ်းလှတဲ့ ဝါဆိုကို သဝန်​တိုတတ်​တဲ့ ဖြိုး​လေး​ကြောင့်​ ရန်​ဖြစ်​လိုက်​ပြန်​ချစ်​လိုက်​နဲ့ သူတို့အချစ်​​ရေး​လေးဟာ အခုချိန်​ထိ တည်​မြဲ​နေတာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဝါဆိုက​တော့ ဒီ​နေ့မှာ​တော့ ချစ်သူ ​ဖြိုးလေးကနေမကောင်းဖြစ်နေပြီး စိတ်မကြည်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကို “သူနေမကောင်းရင် အရစ်လုပ်ပြီ တစ်ချိန်လုံးရစ် ဘာရစ်နေမှန်းကိုမသိတာ”ဆိုပြီးလည်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ မကြာသေးမီကလည်း ဝါဆိုတစ်ယောက် ဖြိုးလေးကို စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်ပြီး အဆိုတော်ဖြိုးလေးနဲ့ လမ်းခွဲကြောင်းသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကဖော်ပြခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စုံတွဲလေးကို ဆုံးရှုံးရပြီလားဆိုပြီး စိုးရိမ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အခုလက်​ရှိမှာ အားလုံး​ပြေလည်​သွားခဲ့ကာ​လေးနှစ်​ကြာလက်​တွဲမြဲ​နေပြီး အခုချိန်​ထိ ချစ်​ချစ်​ခင်​ခင်​​နေ​​နေကြကြည့်​ရတာ စိတ်​ချမ်းသာစရာပါဘဲ​နော်​။ Source_ warso moe oo
ထူး​အောင်​က​တော့ မိန်းက​လေးပရိတ်​သတ်​​တွေရဲ့ အား​ပေးခြင်းကို အထူးရရှိထားတဲ့ ​မော်​ဒယ်​မင်းသား​ချောဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။ လက်​ရှိမှာ အရင်​ကထက်​ကိုအနုပညာ အလုပ်​​တွေမနားတမ်းလုပ်​​နေရပြီး သူရဲ့ ဇာတ်​ကားများကိုလည်းပရိတ်​သတ်​မပြတ်​ကြည့်​ရှု့​နေရပါတယ်​”ကိုယ်​​စောင့်​နတ်​” ဇာတ်​ကားမှာလည်း ပရိတ်​သတ်​အား​ပေးမှုကိုရရှိခဲ့သလို ” အကြင်​နာမြစ်​ဖျား ” ဇာတ်​လမ်းတွဲမှာလည်း ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားသူုဖြစ်​ပါတယ်​။ လတ်​တ​လော ပရိတ်​သတ်​​တွေ စိတ်​ဝင်​စား​နေကြတဲ့ ရိုးမ​ပေါ်ကျတဲ့မျက်​ရည်​ဇာတ်​ကားမှာလည်း ပါဝင်​ထားပါ​သေးတယ်​။ “ရိုးမပေါ်ကသစ်တောဝန်ထောက်ကိုအောင်လွင်။�ရိုးးမပေါ်ကျတဲ့မျက်ရည်။” ဟုဆိုကာ သစ်​​တောဝန်​​ထောက်​အဖြစ်​နဲ့ ခန့်​ညား​နေတဲ့ သူ့ရဲ့ပုံ​လေး​တွေကိုတင်​ထားခဲ့ပါတယ်​။ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​ ရိုးမ​ပေါ်က ထူး​အောင်​ရဲ့ ပုံ​လေး​တွေကိုတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ Source _ Htoo Aung
ရယ်စရာ ဟာသလေးတွေ တင်ရင်း၊ ကရင်းနဲ့ နာမည်ကြီးလာတဲ့ ဆယ်လီမလေး ဖြူဖြူထွေးလေးဟာ ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘုရင်မတစ်ပါးလို နေရာယူထားနေပါပြီ။ သူမဟာ ရိုးသားပြီး ချစ်စရာလဲ ကောင်းပါတယ်။ အလှူအတန်း ပရဟိတလေးတွေလဲ အမြဲ လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အို အပေါ်ကိုလဲ အမြဲလေးစားပြီး ကူညီတတ်သူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်က ပွဲတိုင်းမှာလဲ သူမက အမြဲ ပါဝင် ဖျော်ဖြေပေးနေရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရင်ကထက် တဖြည်းဖြည်း နဲ့ နေတတ်ပြီး လှလာတဲ့ သူမကို ပရိတ်သတ်တွေက အရမ်း ချစ်ခင်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လ အောက်တိုဘာလကလဲ စင်ကာပူကို အလည်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ စင်ကာပူမှာလဲ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ တွဲရိုက်ပြီး ပြုံးပျော်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ […]
အဖြူရောင်ဂါဝန် အပွလေးနဲ့ တည်ငြိမ်ပြီး လှနေတဲ့ မိုးဟေကို
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး မိုဟေကိုဟာဆိုရင် အရမ်းကို တည်ငြိမ်လှပတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သူမရဲ့ မျက်နှာလေးမှာဆိုရင် မျက်ခုံး၊ မျက်လုံးလေးတွေက အသက်ပါပဲ။ ကြည့်မိသူ ပရိတ်သတ်ရဲ့ ရင်ကို အေးမြစေပါတယ်။ ခန္ဒာကိုယ်လေးကလဲ အပြစ်ပြောစရာ မရှိလောက်အောင် ဖြောင့်မတ်ပြီး လှလွန်းပါတယ်။ အပျိုကြီးမမလို့တောင် ပရိသတ်တွေက ခေါ်နေကြပါပြီ။ ခုဆိုရင် အဖြူရောင်ဂါဝန် အပွလေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ “ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုချင်ရင် တစ်ယောက်တည်းနေပါ ” ဆိုပြီး အပျိုကြီးမမက ပျော်စရာ Caption လေးနဲ့ အဖြူရောင် ဂါဝန်အပွနဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ထားပါတယ်။” Source; Moe Hay Ko
သာယာ​ပျော်​ရွင်​စရာ​ကောင်းတဲ့ မိသားစု​လေးကိုပိူင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်​သု​ဝေတို့ဟာ ပရိတ်​သတ်​အားအကျရဆုံး မိသားစု​လေးဘဲဖြစ်​ပါတယ်​။​မေ​မေချစ်​သု​ဝေနဲ့ ​ဖေ​ဖေလင်းလင်းတို့ရဲ့ မင်းသမီး​လေး​တွေ ဖြစ်​တဲ့ ​ခေတ်​နဲ့ သစ်​​လေးတို့ဟာ တစ်​​နေ့တစ်​ခြား နဲ့မျက်​စိ​ရှေ့တင်​ကြီးလာပါပြီ​နော်​။ မကြာခဏ ​ခေတ်​နဲ့သစ်​​လေး​တို့ပုံ​လေးကို ပရိတ်​သတ်​​တွေအတွက်​တင်​​ပေး​လေ့ရှိပြီး ချစ်​ဖို့​ကောင်းတဲ့ ​ခေါတ်​နဲ့သစ်​​လေးကိုလည်း ပရိတ်​သတ်​​တွေက သည်းသည်းလှုပ်​ချစ်​​နေရပါတယ်​။ ​ဖေ​ဖေဖြစ်​သူလင်းလင်း သူ့ရဲ့ ဝါသနာဖြစ်​တဲ့ ဆိုင်​ကယ်​ စီးရတာ​ဘေယ်​​လောက်​ကြိုက်​​ကြောင်းကိုစာချီဖွဲ့နွဲ့ထားပါ​သေးတယ်​။လင်းလင်းကတော့ “မုန့်ကျွတ် လား ? ရွှေကျီး ကိုသိပ်ကြိုက်တာပေါ့,,မုန့်တီ လား ? ဒေါ်တော ပေါ့ဗျာ,,ဇီးပေါင်း လား ? ဟ မတ္တရာကမစီမာ ပေါ့ဟ,,ခိုတောင် လား ? အထမ်းသယ်ရောင်းတာ အားလုံးကြိုက်,,ပဲလမုန့် လား? ကြိုင်သင်း ကိုသိပ်ကြိုက်,,အုန်းထမင်း,ဒံပေါက်လား ? ကရဝိတ်ဆီသွား,,, နှမ်းမနဲ လား ? ဖားသားလဖုန်း နားမှာ ဒေါ်ရှိ ရှိတယ်လေ,,မြီးရှည် […]